Nisara-bazana tamin’ny fanitarana ny fe-potoana iasana napetrak’i Beijing ny mpanao lalàna mpanohana ny demokrasia any Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Hanaiky ny fitsabahan'i Beijing sa hanao ankivy ny LegCo?
Voadika ny 31 Aogositra 2020 13:19 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Ελληνικά, Español, English
Nandrehitra ny fanoherana i Carrie Lam, Lehiben'ny Mpanatanteraka ao Hong Kong, ny 21 Aogositra taorian'ny nanambarany ny fahameham-pahefana hanemorana ny fifidianana ny Filankevitry ny Mpanao Lalàna (LegCo) amin'ny volana Septambra 2021, nolazainy ny olana momba ny COVID-19.
Tokony hifidy LegCo vaovao amin'ny 5 Septambra i Hong Kong. Nitranga ny ampitson'ny fanesorana ny kandida miisa 12 mpanohana ny demaokrasia tsy handray anjara amin'ny fifidianana ny fanapahan-kevitr'i Lam, izay niteraka resabe tamin'ny volana Jolay sy ny fitomboan'ny fitsabahan'i Beijing amin'ny fitantanana ny tanàndehibe.
Etsy ankilany, nanapan-kevitra ny hijanona ao amin'ny LegCo ny antoko Demokratika sy ny antoko Sivily, zanaka antoko mpanohana ny demaokrasia mpandala ny mahazatra kokoa izay manana mpikambana betsaka indrindra ao aminy avy amina vondrona matihanina. Nanazava ny heviny tao amin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny sehatra famoaham-baovao an-tserasera ao an-toerana ny filohan'ny Antoko Demokratika teo aloha, Albert Ho:
Nifandrafy tamin'ny lohahevitra maromaro nampiady hevitra tato anatin'ny volana vitsivitsy ny mpanohana ny mpitondra sy ny mpanohana an'i Beijing. Anisan'izany ireo fanovana ifotony amin'ny asan'ny filankevitry ny distrika izay mamela ny Hongkongers ao amin'i Shina tanibe hifidy, ny fampiharana ny rafi-pahasalamana misy kaody miloko ao an-tanàndehibe, ary ny fanavaozana ny lalàmpanorenana izay hanova ny fitsipiky ny fifidianana ny Lehiben'ny Mpanatanteraka manomboka. amin'ny 2022.
Raha naneho hevitra ny mpahay siansa ara-politika fa hitarika amin'ny fanilikilihana ny mpanohitra sy ny fanamafisana ny fahefana didy jadona ny fanaovana ankivy ny LegCo dia, ireo mpandala ny ao an-toerana kosa miaro izany amin'ny antony ara-moraly – manizingizina izy ireo fa tsy tokony hanatevin-daharana ny LegCo ny mpanao lalàna raha tsy misy fahefana avy amin'ny vahoaka.
Nanampy ny mpandala ny ao an-toerana sasany fa amin'ny fanesorana faobe ireo kandida mpanohana ny demaokrasia mahavelom-panantenana mandritra ny vanim-potoana fanendrena dia tokony hamela tanteraka ny politikam-panjakana ny mpanohitra.
Mazava ho azy fa niely tamin'ny tambajotra sosialy ny adihevitra, niaraka tamin'ny adihevitra indraindray nivadika ho fahatezerana satria nisy mpisera sasany nilaza fa “mpamadika maty eritreritra” ireo mpanao lalàna mpanohana ny demaokrasia izay mankato ny fanendrena nataon'ny NPC.
Tamin'ny fanoherana izany toe-draharaha izany no nangatahan'ny mpanao lalàna mpandala ny ao an-toerana Chu Hoidick ny fangalana ny hevitry ny besinimaro na ny fanaovana ny fitsapan-kevi-bahoaka.
Mandritra izany fotoana izany, maro ny miahiahy fa hanimba tanteraka ny herin'ny mpanohitra ao an-tanàndehibe ny fisaraham-bazana eo amin'ny mpandala ny ao an-toerana sy ny démokraty, amin'ny fampihenana ny fahafahan'ny mpanohitra any Hong Kong – na inona na inona fanapahan-kevitra farany ho raisin'ny mpanao politika momba ny hoe hijanona sa hanao ankivy ny fanalavana ny fe-potoana iasan'ny LegCo.